ဗိုလ်ကတော် ဒေါ်နီနီကျော် – Grab Love Story
ဇော်ရဲတယောက် ချောင်းသားကမ်းခြေမှာ ၁၀ ရက်လောက်အပြတ်ကဲလိုက်သည်။ ထိုအကြောင်းများကို စာဖတ်သူများ အီသွားနိုင်သဖြင့် မပြောတော့ပါ။ မမချိုတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးသည်ပုံမှန်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပြီး မမချိုရန်ကုန်မှ မပြောင်းမချင်း ဇော်ရဲနှင့် တပတ်တခါလောက်တော့ ကဲဖြစ်ခဲ့သည်။ မမချိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်ဂုဏ်သရေရှိအသိုင်းအဝိုင်းမှ မမကြီးများနှင့်လည်း ကြုံရင်ကြုံသလို ထပ်မံပြီး ကဲဖြစ်သည်များကိုလည်း ပြောပြပါဦးမည်။ သို့သော် ဇော်ရဲတယောက် လူပျိုရည်ပျက်ရသည့်အကြောင်းကိုမူကား ချစ်သောစာဖတ်သူများ သိချင်ပြီးဖြစ်လောက်နေသဖြင့် ယခု တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဇော်ရဲတယောက် မိဘပိုက်ဆံဖြင့် ၁၀ တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် တေပေခဲ့သောကြောင့် စာမေးပွဲမကျသော်လည်း သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ အမှတ်မကောင်းသဖြင့် ရိုးရိုးမေဂျာအမှတ်ကိုသာ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသို့ အလုပ်သွားလုပ်ရန်သာ ရည်ရွယ်ပြီး အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကိုသာ တက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်ထိ မိန်းမအတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိသေး။ တနှစ်တတန်း မှန်မှန်အောင်ခဲ့သောကြောင့် ၁၀ တန်းအောင်ချိန်တွင် ၁၆ နှစ် ကျော်ကာစပင်ရှိသေးသည်။ ယခုကဲ့သို့လည်း ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမဖြစ်သေး။ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နှင့် အတော်အကြည့်ရဆိုးသည်။ လတ်သောအသားအရေသည် အနည်းငယ်ညိုသယောင်ထင်ရသည်။
သူငယ်ချင်းများ ခေါ်တိုင်းအ အပြင်ထွက်လည်သဖြင့် နေလောင်ထားသော အသားအရေများကို မိဘများက အဖိုးတန်အသားအလှဆီများဖြင့် အိမ်ရောက်တိုင်း လိမ်းပေးရသည်။ သို့သော် မည်မျှပင် ခန္ဓာက သေးသွယ်နေစေကာမူ သူ၏ ဖွားဖက်တော်ကြီးကတော့ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ကြီးမားနေသည်မှာ သူနှင့် အနီးဆုံးပေါင်းသင်းနေသော သူငယ်ချင်းများ အသိပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ အရွယ်က ကလေးဘဝကျော်ပြီဖြစ်သဖြင့် လူပျိုစိတ်များဝင်နေသော်လည်း မိဘက အရိပ်တကြည့်ကြည့်ရှိနေတတ်သောကြောင့် အခြားလိုလေသေးမရှိသည်များကို တောင့်တပူဆာရဲသော်လည်း မိန်းမကိစ္စကိုတော့ သူမစမ်းသပ်ရဲ။ သူငယ်ချင်းများတိုက်တွန်းမှုဖြင့် စမ်းသပ်လိုစိတ်ဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လွဲချော်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေမရောသေးသည့် လူပျိုစစ်စစ်ဘ၀ကို ဇော်ရဲတယောက် ထိုအချိန်က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။
သို့သော် …. သို့သော် …. တက္ကသိုလ်မတက်ရသေးခင် ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း သူငယ်ချင်းများနှင့် အချိန်ဖြုန်းနေစဉ်အတွင်း ဇော်ရဲလူပျိုရည်ပျက်ဖို့ရာ အကြောင်းက ဖန်လာပါတော့သည်။ ဇော်ရဲမိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးတမျှခင်သော ( ) မြို့နယ်မှ မ၀တဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခိုင်နှင့် သူ၏ ချစ်ဇနီး ဒေါ်နီနီကျော်တို့ ရန်ကုန်သို့ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ရောက်သောအခါ သူတို့အိမ်တွင် တည်းပါသည်။ ဒေါ်နီနီကျော်က အရာရှိတယောက်၏ ကတော်မှန်း သိသာသည်။ ညင်သာသိမ်မွေ့သော အပြောအဆိုအနေအထိုင်ဖြင့် လှပသန့်ရှင်းသပ်ယပ်စွာ နေထိုင်တတ်သည်။ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေကလည်း မင်းကတော်စိုးကတော်လိုမျိုး ၀တ်စားဆင်ယင်တတ်သည်။ အသက်က ၄၀ ကျော်ကာစပင်ရှိဦးမည်။ သို့သော် ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရသူတွေ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း အရွယ်တင်နုပျိုသည်။ အသက် ၂၈ နှစ်ဟုပြောပါက မည်သူမဆိုယုံကြည်မည်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကလည်း အသက်အရွယ်ကြောင့် ခါးတွင် အဆီအနည်းငယ်ရှိနေသည်မှအပ ရင်သားထွားထွား၊ တင်သားကားကားဖြင့် လုံးကြီးပေါက်လှ ရွှေဘိုမင်းကြိုက်ပုံစံဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း မ၀တဥက္ကဌကတော်ဖြစ်သည်ပေကိုး။ ဇော်ရဲကို တူသားတယောက်လို လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက အထူးပင်ချစ်ခင်ကြသည်။ ရောက်သည့်နေ့ကပင် ဇော်ရဲဝတ်ဖို့ဆိုပြီး ၀ယ်ပေးသော်အ၀တ်အစားတွေက နည်းနည်းနောနောမဟုတ်။ ဇော်အဖေရောအမေရောကပင် တောင်းပန်ယူကြရသည်။ ယောက်ျားလုပ်သူဗိုလ်မှူးကြီးက စစ်ရုံးသို့ တာဝန်ဖြင့် တနေကုန်သွားနေရချိန်တွင် ဒေါ်နီနီကျော်က ဇော်ရဲတို့အိမ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ လူကုံထံတွေသာနေနိုင်သည့် ရပ်ကွက်မို့ ပတ်ဝန်းကျင်က တိတ်ဆိတ်လွန်းသည်။ ဇော်ရဲအဖေကလည်း ရုံးသွား၊ အမေကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားဖြင့် အိမ်တွင် ကားဒရိုင်ဘာ ကိုအောင်ဖေတို့ လင်မယား၊ ဇော်ရဲနှင့် ဒေါ်နီနီကျော်သာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အိမ်တွင် ဧည့်သည်ရောက်နေသဖြင့် အပြင်သို့ မထွက်ရန် မိဘများကပြောထားသောကြောင့် ဒေါ်နီနီကျော်၏ အဖော်အဖြစ် ဇော်ရဲတယောက်နေပေးရသည်။
ထိုအချိန်က အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရလျှင် ဇော်ရဲတယောက် ကလေးစိတ်သာသာပင်ရှိနေပါသေးသည်။ တနေ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအသွားကိုလိုက်ပို့ရင်း ဒေါ်နီနီကျော်က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲရှိ မိခင်ဆိုင်နှင့် သိပ်မဝေးသော အထည်ဆိုင်တခုသို့ ခေါ်သွားပြီး ဇော်ရဲအား ဂျင်းဘောင်းဘီများ ၀ယ်ပေးပြန်သည်။ ပြီးနောက် မိခင်အားထားခဲ့ပြီး အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုရက်ပိုင်းအတွင်း ဗိုလ်မှူးကြီးကလည်း ဇော်ရဲတို့အိမ်သို့ အိမ်ပြန်မလာဘဲ စစ်ရုံးမှ အရာရှိရိပ်သာတွင်သာ နေထိုင်လေ့ရှိသည်။ အိမ်သို့ပြန်ရောက်သော် … သားရေ …. အန်တီတို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီလေးတွေ ပြန်ဝတ်ပြပါဦး၊ ကိုယ့်တူ လူချောကို ထပ်ကြည့်ရဦးမယ် ဇော်ရဲက ရှက်ရွံ့သောအမူအယာဖြင့် ဟုတ်ကဲ့လုပ်လိုက်ရသည်။ ဇော်ရဲတခုသတိထားမိလိုက်သည်ကတော့ ဒေါ်နီနီကျော် ခိုင်းသမျှကို အညှို့ခံထားရသည်ပမာ လိုက်လုပ်နေရခြင်းပင်။ ဇော်ရဲက အခန်းထဲသွားပြီးဝတ်မည်ဆိုတော့ … အောင်မလေး ကိုယ့်အန်တီကိုရှက်နေပြန်ပြီ၊ အန်တီရှေ့မှာ ၀တ်စမ်းပါ ကလေးပဲ၊ ဘယ်သူမှရှိတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ သို့သော် ဇော်ရဲတယောက် မ၀တ်ရဲပါချေ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အန်တီနီနီကျော်ကို ယနေ့မှထူးထူးခြားခြားဂရုစိုက်ပြီး ကြည့်မိခဲ့၍ အန်တီနီနီကျော်၏ အိစက်လှပသော တင်သားစိုင်ကြီးများသည် သူ့စိတ်အား တမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သည် မဟုတ်လော။ မှန်ပါသည်။ အန်တီနီနီကျော်၏ တင်သားစိုင်ကြီးများကြောင့် အမျိုးအမည်မသိသော ဝေဒနာကို ဇော်ရဲတယောက် စတင်ခံစားနေရသဖြင့် သူ့ပေါင်ကြားတွင်းမှ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် ထွားကြိုင်းသန်မာစပြုနေပြီဖြစ်သော လီးကြီးက အောက်ခံဘောင်းဘီအား ရုန်းထွက်နေစပြုနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အန်တီနီနီကျော်ကလည်း မရပါချေ။ ကဲပါသားရယ် လိမ္မာပါတယ်။ အန်တီက ကိုယ့်တူလေး မင်းသားလို လှစေချင်လို့ ၀ယ်ပေးတာကို။ အန်တီကျေနပ်အောင်ဝတ်ပြမှပေါ့။ ကိုယ့်အန်တီကိုရှက်နေသေးတယ် ဟု ပြောလည်းပြော ချွတ်လည်းချွတ်လိုက်လေသည်။ ပုဆိုကျွတ်သွားသောအခါ အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်မှ ရုန်းကန်ရင်း အန်တီနီနီကျော်၏ မျက်ဝန်အစုံ ပြူးကျယ်သွားလောက်အောင်ပင် ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးက ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။
အိုး …. သားက ကလေးမှ မဟုတ်တာပဲ။ လူကြီးဖြစ်နေပြီ။ ဒါ့ကြောင့်ရှက်နေတာကိုး ဟု ပြောဆိုကာဖြင့် ဇော်ရဲလီးကြီးကို အန်တီနီနီကျော်က မသိမသာ ကိုင်ကြည့်လိုက်ပါတော့သည်။ အား ပါးပါး …. သားဟာက နည်းတာကြီးမှ မဟုတ်ဘဲကွယ်။ မင်းအန်ကယ်တောင် သေးသေးလေးရယ်။ အန်တီပွင့်ပွင့်လင်းမေးမယ်နော်။ သား မိန်းမတွေနဲ့ အိပ်ဖူးလား ဟင့်အင်း …. …. ဟု ဇော်ရဲကပြောဆိုလိုက်သည်။ ဇော်ရဲ၏ အခန်းထဲတွင်တော့ အန်တီနီနီကျော်နှင့် ဇော်ရဲ (၂) ဦးထဲသာ၊ ကျောင်းတွင် အပြာစာအုပ်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကြည့်ဖူးသော အပြာကားများတွင် ဖိုမ လိင်ဆက်ဆံပုံများ တွေ့ဖူးသော်လည်း ရည်းစားတယောက်မှမထားဘူးသေးသော ဇော်ရဲအဖို့ အခန်းထဲတွင် အမျိုးသမီးတဦးနှင့် နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံရသည်တွင်တော့ ဇော်ရဲတယောက် ကြက်သီးမွှေးညင်းတွေထကာလာပြီး ရင်တွေအရမ်းခုန်နေသည်။ ဒါဟာ အချစ်ဆိုတာများလား ……. ဇော်ရဲမေးခွန်းတွေ အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်နေမိပြန်သည်။ အန်တီနီနီကျော်ကတော့ ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို ခွတ်လိုက်သည်။ ကြီးမားလှပသော နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးက ဘရာစီယာ ကိုကျော်ကာ လျှံထွက်နေသည်ဟုထင်ရသည်။
မေမေတို့ ဖေဖေတို့သိရင်တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်အန်တီ။ သားကြောက်တယ် သားရယ် အန်တီကရော သိအောင်လုပ်ပါ့မလား။ မင်းမေမေတို့ မသိစေရပါဘူး။ အန်တီခိုင်းတာပဲလုပ်ပေးဟုဆိုကာ ဇော်ရဲလီးကြီးအား အောက်ခံဘောင်းဘီအပြင်သို့ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတော့သည်။ ထို့နောက် ဇော်ရဲကို ခုတင်ပေါ်သို့ အသာတွန်းချလိုက်ပြီး သူမ၏ ထမီကို ချွတ်ချလိုက်ပါသည်။ လှပသော ပန်းနုရောင်အောက်ခံဘောင်းဘီက အန်တီနီနီကျော်၏ အသားစိုင်များကို တင်းကြပ်စွာ တုပ်နှောင်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုအောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို အန်တီနီနီကျော်ချွတ်ချလိုက်ချိန်တွင်တော့ ဇော်ရဲတယောက် ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးနှင့် အဆက်ပြတ်သွားသည့်အလား လောကကြီးကို ခေတ္တမေ့သွားပါတော့သည်။ နီရဲမို့ဖောင်းနေသော အန်တီနီနီကျော်၏စောက်ဖုတ်လေးက သူ့ဘ၀တွင် ပထမဆုံးအရှင်လတ်လတ်မြင်ဖူးသော စောက်ဖုတ်လေးအဖြစ် တသက်မမေ့နိုင်အောင် ဖြစ်သွားရပါတော့သည်။
အန်တီနီနီကျော့်စောက်ဖုတ်လေးကို မြင်တွေ့လိုက်သည်နှင့် ဇော်မျိုးတယောက် ကမ္ဘာကြီး အိုးထိမ်းစက်ပမာ ခြားခြာလည်သွားသည်ဟု ထင်မိတော့သည်။ စောက်ဖုတ်တခုလုံး အမွှေးအမျှင်များ ကင်းစင်အောင် ရိတ်ထားပြီး စောက်ဖုတ်အုံတခုလုံးက နီရဲ မို့ဖောင်းနေသည်။ ဇော်ရဲတယောက် ကလေးဘ၀က ကျွတ်ခါစ၊ လူပျိုဘ၀စတုန်းပင်ရှိသေးသည်။ ယခုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်ကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံတွေ့ရသောအခါ ရင်တွေအရမ်းခုန်လာသည် အာခေါင်တွေ ခြောက်သွေ့လာသည်။ တသက်လုံး လက်းမွှေးမီးမလောင် ခြေမွှေးမီးမလောင် နေခဲ့ရသော သူဌေးသမီးဘ၀၊ တက္ကသိုလ်မှ မဟာတန်းတက်နေရင်း အိမ်မှပေးစားသော ဗိုလ်ကြီးအောင်ခိုင်နှင့် ယူတုန်းက သူမအသက်က ၂၀ ကျော်ခါစပင်ရှိသေးသည်။ မ၀တဥက္ကဌကတော်ဆိုတော့ အရာရာကို ဖြစ်စေနိုင်သူဟုထင်မိသည်။ သို့သော် သူလိုချင်သော အချစ်မျိုးကိုကား ဒေါ်နီနီကျော် တယောက် မရရှိခဲ့ပါ။ အဆိုပါလိုချင်တပ်မက်သည့် အချစ်သည်ကား ရမ္မက်တွေနှင့် လှိုက်ဖိုမောပြီး ပင်လယ်ပြင်က လှိုင်းလုံးကြီးများစီးရသည့် အချစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗိုလ်ကြီးအောင်ခိုင်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခိုင်ဖြစ်သည်အထိ ဒေါ်နီနီကျော် အပေါ် အေးစက်သည့်ရေခဲတုံးလို အချစ်မျိုးကိုသာ ပေးဆပ်ခဲ့သည်။
မ၀တဥက္ကဌကတော်ဆိုတော့ သိက္ခာကြီးများ တနင့်တပိုးနှင့် ဟန်ဆောင်နေရသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာမှာလည်း မြို့နယ်တခုလုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပြန်သဖြင့် သူမ၏ လွတ်လပ်ခွင့်များ ဆိတ်သုဉ်းနေခဲ့သည်။ ယခုတော့ သူမအတွက် လိုချင်တောင့်တနေသော အချစ်အိုအေစစ်ကလေးကို သားအရွယ် ကောင်းလေးငယ်ငယ်လေးဆီမှ ရမည်ကိုသိသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်တယောက်လို ရင်တွေဘာတွေ ပြန်ခုန်နေပြန်သည်။ ရင်ခုန်ရုံသာမက ရင်ပါဖိုသွားရသည်ကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူလိုချင်သောအချစ်ကိုပေးမည့် ကောင်းလေးငယ်ငယ်လေးဆီမှလည်း မတန်တဆ အရွယ်နှင့်မလိုက် ကြီးမားထွားကြိုင်းသော လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အန်တီနီနီကျော်တယောက် ရင်ခုန်ခြင်း ရင်ဖိုခြင်းများကို ခေတ္တမေ့လျော့ကာထားပြီး ထိုသတ္တဝါကြီးအား မည်သို့ လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင် သွန်သင်ရမည်ကို အကြံထုတ်ရင်း ဇော်ရဲအား ခုတင်ပေါ်သို့ ညင်သာစွာ တွန်းချလိုက်ပါတော့သည်။ အိစက်ညက်ညောနေသော မွေ့ယာ၏ အထိအတွေ့က သာမန်နေ့များက လဲလျောင်းအိပ်စက်ရသည်နှင့်မတူ အတော်ပင်ထူးခြားနေသည်ဟု ဇော်ရဲထင်မိသည်။
ကြက်သီးမွှေးညင်းများပင် ထနေမိသည်။ အန်တီနီကျော်တယောက်ကတော့ ဇော်ရဲလီးကြီးကိုကိုင်ကာ ပွတ်သပ်နေပါသည်။ အန်တီနီကျော်ကိုကြည့်ရသည်မှ မြွေအလပ္ပာယ်ဆရာမလေးတဦးနှင့်ပင်တူနေပါသည်။ သူမ၏ ဖြူနုဝင်းဝါနေသော လက်ချောင်းမို့မို့ကလေးများကြားမှ ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးက ပြင်းထန်စွာထောင်မတ်လာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ သားရေ … ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်၊ သားနဲ့အန်တီကြားမှာ ဘာတွေမှမရှိတော့ဘူး။ နောင်တချိန် သား မိန်းမတွေနဲ့ နေရင် အတွေ့အကြုံမစိမ်းရအောင် အန်တီလုပ်ပေးနေတာ။ နောက်ပြီးကျရင် သားဇိမ်ကျသွားလိမ့်မယ် ဇော်ရဲကတော့ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ရင်ခုန်ခြင်းများစွာဖြင့် အချစ်၏အရသာကို စတင်ခံစားစပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အန်တီနီကျော်က ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးအား လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးရာမှ သူမ၏ နီရဲဖူးကြွနေသော နှုတ်ခမ်းအစုံဖြင့် စုပ်လိုက်ပါသည်။ အိုး … သား လီးကြီးက အန်တီ့ပါးစပ်နဲ့တောင် မဆံ့ဘူးကွယ်၊ အားပါး ပါး ကြီးလိုက်တာကြီး ဟုပြောဆိုပြီး လီးဒစ်ပိုင်းဝင်အောင် စုပ်ယူလိုက်ပါသည်။
အား …. သား တမျိုးကြီးပဲ အန်တီနီကျော်ရယ်၊ မလုပ်ပါနဲ့ ဇော်ရဲထံမှ ညည်းညူသံနှင့်အတူ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ နှစ်သားခန့်မှစပြီး ဂွင်းထုဖူးသဖြင့် လီးအပေါ်ယံအရေခွံကျွတ်ကာ လူကြီးတယောက်လိုဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း အန်တီနီကျော်၏စုပ်ချက်ကို ဇော်ရဲတယောက် မခံနိုင်သေးပါ။ အန်တီနီကျော်ကလည်း အတော်ပင် ကျွမ်းကျင်ပါးနပ်သူတယောက်ဖြစ်ပါသည်။ လီးကိုစုပ်ပြီး ပြန်ထုတ်သောအခါ လျှာဖျားဖြင့် လီးထိပ်ကို သပ်ကာ ထုတ်ပေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကြိမ် ၄၀ ခန့်မျှ ဆက်တိုက်စုပ်လိုက် ထုတ် လုပ်ပေးသောအခါတွင်တော့ ဇော်ရဲမျက်လုံးများမှေးစင်းကာ အန်တီနီကျော်၏ ပခုံးသား အိအိဖောင်းဖောင်လေးများကိုကိုင်းရင်း စည်းစိမ်တွေ့လာပါသည်။ ဇော်ရဲ လီးထိပ်မှလည်း ကာမရှေ့ပြေးအရည်ကြည်များ စိမ့်ယိုထွက်စပြုလာပါပြီ။ ထိုအရည်များကို အန်တီနီကျော်တယောက် ထွေးမထုတ်ပစ်ခဲ့ပါ။ ဇော်ရဲတယောက် ကာမအရသာကို စတင်မြည်းစမ်းရင်းမှ စတင်နှစ်သက်လာပါတော့သည်။
ထိုအချိန်တွင် အန်တီနီကျော် စောက်ဖုတ်ကလေးထဲမှနေ၍ ကာမအရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်စပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့်မျှ ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးကို စုပ်ပေးပြီး အန်တီနီကျော်တစ်ယာက် ဇော်ရဲအပေါ်မှ ခွထိုင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါတော့သည်။ ဇော်ရဲနောက်ကျောကို ခေါင်းအုံးများနှင့် မှီ၍ ထိုင်ထားစေသည်။ ထို့နောက် ထောင်မတ်နေသည့် ဇော်ရဲ လီးကြီးအား တံတွေးထပ်ဆွတ်ပြီး သူမ၏ လှပဖောင်းမို့နေသော စောက်ဖုတ်နီနီရဲရဲလေးထဲသို့ သွင်းလိုက်ပါသည်။ သို့သော် …. အောင်မလေး … ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် …. ကြီးလိုက်တာသားရယ်၊ အန်တီ့အဖုတ်လေးတော့ ကွဲတော့မှာပဲ ဇော်ရဲတယောက် နားမလည်ပါ။ သူသိသည်ကတော့ အန်တီနီကျော့်စောက်ဖုတ်ထဲသို့ သူ့လီးကြီး ၀င်သွားကာ မည်ကဲ့သို့သော အရသာမျိုးဖြစ်မည်နည်းဟူသောမေးခွန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အန်တီနီကျော်၏ လှပဝိုင်းစက်စွင့်ကားသော ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးများကလည်း ဇော်ရဲ၏ ကာမဆိပ်ကို ပိုတက်သည်ထက်တက်စေရန် နှိုးဆော်ပြန်ပါသည်။ အန်တီနီကျော်နောက်တကြိမ်ထပ်ကြိုးစားပြန်ပါသည်။ ယခုတကြိမ်တွင်တော့ အန်တီနီကျော်သည် ဇော်ရဲလီကြီးတွင်သာမက သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးတွင်လည်း တံတွေးများ စိုရွှဲနေအောင် သုတ်လိမ်းလိုက်ပါသည်။
ထို့နောက် သူမ၏ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးများကို အနည်းငယ်ပိုဖြဲလိုကပြီး ဇော်ရဲလီးပေါ်သို့ ဆောင်ချလိုက်သောအခါ …. အား …… ဇော်ရဲရော အန်တီနီကျော်ရော ၂ ဦးစလုံး၏ အော်သံထွက်သွားပါသည်။ နာတယ် အန်တီနီကျော်ရယ် …. သား နာတယ် ကောင်းသွားမှာပါသားရယ်။ ခဏလေးတော့ သည်းခံနော်သား။ အန်တီလဲ အရမ်းနာနေတာပဲကွယ်။ သားလီးကြီးကကြီးတာကိုးသားရဲ့ အန်တီနီကျော်ရော သားရော ကွဲသွားနိုင်လားဟင် အန်တီတံတွေးဆွတ်ထားပါတယ်သားရဲ့ အား အိုး ………. ဟုပြောကာ အန်တီနီကျော်က ထပ်မံဆောင့်ချလိုက်ပြန်ပါသည်။ အသက်အရွယ်လည်းရ၊ အိမ်ထောင်သည်လည်းဖြစ်၊ အတွေ့အကြုံလည်းရင့်ကျက်သော အန်တီနီကျော်၏ လှုပ်ရှားမှုအောက်တွင် ဇော်ရဲတယောက် ယုန်သူငယ်ပမာ ဖြစ်ရပါတော့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အန်တီနီကျော်၏ ဆောင့်ချက်များအောက်တွင် နှစ်ဦးစလုံး အရသာတွေ့လာပါသည်။ ဇော်ရဲတယောက် အန်တီနီကျော်၏ ကြီးမားလှပသော နို့အုံကြီးများကို နောက်ကျောမှ သိုင်းဖက်ကာ ပွတ်ချေပေးနေမိသည်။ အန်တီနီကျော်က ဇော်ရဲ၏ ညာဖက်လက်ကိုယူကာ သူမ၏ စောက်စေ့လေးဆီသို့ ပွတ်ချေပေးခိုင်းသည်။
အား …. ကောင်းလိုက်တာသားရယ်။ အန်တီနီနီကျော်လိုချင်တဲ့ အရသာကို သားက ပေးနိုင်တယ်။ အန်တီနီကျော်ရင်တွေခုန်လာပြီကွယ်။ အား ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် …. ကောင်းလိုက်တာ ဇော်ရဲတယောက်လည်း အန်တီနီကျော်၏ ဖင်သားကြီးများကိုကြည့်ကာ ထူးခြားသော အရသာတမျိုးကို ခံစားနေရပါသည်။ ထိုအရသာသည် သူသိပ်ကြိုက်သော အစားကောင်းအသောက်ကောင်းများ စားသောက်ရသည်နှင့်လည်းမတူပါ။ ခြားကိုခြားနားလှသည့် အရသာထူးဟု ထင်နေမိပါသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန်မျှ အန်တီနီကျော်တယောက် ဇော်ရဲအပေါ်မှ ဆောင့်ပေးပြီးသည့်နောက် ဇော်ရဲလီးကြီးကို သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ နှုတ်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် ဇော်ရဲဘေးတွင် ပက်လက်လှန်ကာ ပေါင်ကိုကားပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် ဇော်ရဲအား အပေါ်မှ တက်လုပ်ပေးရန်ပြောလိုက်သည်။ ဇော်ရဲတယောက် မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နှင့် အန်တီမျိုး၏စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လီးကြီးကို ကိုင်ကာသွင်းလိုက်ပါသည်။ သို့သော် ၂ ကြိမ်ခန့်မျှ ချော်ထွက်နေသဖြင့် အန်တီနီကျော်မှ ကိုင်ကာထည့်ပေးရပါသေးသည်။ ဇော်ရဲ၏ ကျောပြင်ကိုသိုင်းဖက်ကာ ဇော်ရဲ၏နှုတ်ခမ်းများအား အန်တီနီကျော်မှ အငမ်းမရစုပ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ ဇော်ရဲတယောက် မြေကြီးနှင့် လွတ်ထွက်သွားလေသလား၊ မိုးပေါ်တွင် ပျံဝဲနေသလားဟုပင်ထင်မိပါသည်။
ဇော်ရဲတချက်ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း အန်တီနီကျော်မှလည်း ဖင်ကြီးကို အပေါ်သို့မြှောက်ကာကော့ပေးပါသည်။ သားရေ …. အန်တီတော့ ကောင်းလာပြီ၊ အန်တီပြီးတော့မယ် ဇော်ရဲတယောက် အန်တီနီကျော်ပြောခြင်းကိစ္စကို နားမလည်နိုင်ပါ။ ပြီးသည်ဆိုခြင်းကိုလည်း သူကောင်းကောင်းမသိပါ။ လီးထဲမှ သုတ်ရည်များထွက်လျှင်ပြီးသည်ကိုတော့ အပြာကားများကြည့်ပြီး ကောင်းစွာသိနေပါသည်။ စောက်ဖုတ်ကတော့ မည်ကဲ့သို့ပြီးသည်ဆိုခြင်းကိုမူ သူမသိပါ။ သို့သော် အန်တီနီကျော်၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများသည် စလုပ်စနှင့်မတူဘဲ ပိုမိုတင်းကြပ်လာနေသည်ကိုတော့ ကောင်းစွာသတိထားလိုက်မိပါသည်။
သားရေ အန်တီနီကျော်ပြီးတော့မယ်။ ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ပေး ….. အား …. ကောင်းလိုက်တာ ….. ကောင်းလိုက်တာ အား …… ပြီးတော့မယ် သားရေ ….. ပြီးတော့မယ်…. ခပ်ပြင်းပြင်းလေးလုပ်ပေးပါဦး ကောင်းလိုက်တာသားရယ် ….. ….. အိုး …… ရှီး………….အား ညည်းညူသံမျိုးစုံထွက်ပြီး ဇော်ရဲ၏ ခါးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ပြီး အန်တီနီကျော်တယောက် ဖင်ကြီးကိုကော့ခါဖြင့် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်သွားပါလေတော့သည်။ ဇော်ရဲတယောက်လည်း အန်တီနီကျော်စောက်ဖုတ်ကလေးကို စည်းချက်ညီညီ ပြင်းပြင်ထန်ထန်ဆောင်ကာဖြင့် ကာမစည်းစိမ်ကို တွေ့ရှိနေပါသည်။ အန်တီနီကျော်စောက်ဖုတ်ကလေး၏ တင်းကြပ်သောဝေဒနာသည် လူပျိုရိုင်းဇော်ရဲအဖို့ မည်သို့မျှ ခံနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်သည်ကိုလည်း စာရှုသူမိတ်ဆွေများကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နေမည်ဟုထင်ပါသည်။
အား ….. အန်တီနီကျော်….. သားလီးထိပ်က တမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်။ အန်တီနီကျော်….. ကျဉ်လာသလိုပဲ၊ အား ……………..အိုး ဇော်ရဲသည်လည်း ပြီးခါနီးသည်ကို ကောင်းစွာမပြောတတ်သေးဘဲဖြစ်နေပြန်သည်။ အန်တီနီကျော်၏ စောက်ဖုတ်လေးကတော့ ဇော်ရဲလီးကြီးအား ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ညှစ်ပေးနေသဖြင့် ဇော်ရဲ၏ ပြီးချင်စိတ်အား ကောင်းစွာ မထိမ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါ သားလည်းပြီးတော့မယ်။ သား သုတ်ရည်တွေကို အန်တီ့စောက်ဖုတ်ထဲပန်းထည့်လိုက်။ ထိန်းပြီးပန်းနော် တအားဆောင့်မပန်းလိုက်နဲ့ အန်တီအောင့်သွားလိမ့်မယ်။ ဖြည်းဖြည်းနော်သား အား …… တမျိုးကြီးပဲ အန်တီနီကျော် သားလည်း အန်တီ့လိုကောင်းတာမျိုးလားမသိဘူး။ အား … အိုး ……… အား…… ပြီးပြီး အန်တီမျိုး …….. ပြီးပြီ …..အား….. ဇော်ရဲ အန်တီနီကျော်ပြောသည့်အတိုင်း မလိုက်နာနိုင်ပါချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူပျိုရိုင်းအဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကာ စိတ်နှင့်လူနှင့်လည်း လုံးဝမကပ်ပါတော့ချေ။ အန်တီနီကျော်စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ သုတ်ရည်နွေးနွေးများကို အသားကုန်ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်။
အန်တီနီကျော်လည်း သားအိမ်ကိုပြင်ထန်စွာဆောင့်သည့် နာကျင်သောဝေဒနာကို ခံစားမိသော်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် လီးအလွန်ကြီးသော လူပျိုလေးတဦးနှင့် ကာမစပ်ယှက်ရသည့်အရသာကို မိုးမမြင်လေမမြင် ခံစားလိုက်ပါတော့သည်။ သားအိမ်တွင်းသို့ဝင်လာသည့် ပူနွေးသောအသိစိတ်ကြောင့် ကြက်သီးမွှေးညင်းများဖြင့်ထကာ ဖင်ကြီးကိုကော့ရင်း ဇော်ရဲအား ယခင်ကထက် တင်ကြပ်စွာဖက်ထားလိုက်ပါတော့သည်။ ထို့အတူ ဇော်ရဲသည်လည်း အန်တီနီကျော်၏ ကိုယ်လုံးအိအိနွေးနွေးပေါ်သို့ မှောက်ချကာ အန်တီနီကျော်၏ နှုတ်ခမ်းများကို အငမ်းမရစုပ်ရင်း ကာမစည်းစိမ်ကို ခံစားလိုက်ပါတော့သတည်း။